जिउँदो मान्छेलाई मरेको भन्दै माइकिङ गर्ने प्रहरी प्रमुख को थिए ? गल्ती गर्ने प्रहरी, गाली खाने मिडिया ? — Sanchar Kendra
जिउँदो मान्छेलाई मरेको भन्दै माइकिङ गर्ने प्रहरी प्रमुख को थिए ? गल्ती गर्ने प्रहरी, गाली खाने मिडिया ?
विहीबार जुम्लामा डा गोविन्द केसीको अनशनलाई साथ दिन प्रतिष्ठानमा जम्मा भएका समर्थकलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले नै जिउँदो मान्छेलाई मरेको भन्दै झूठको खेती गर्नसम्म भ्यायो ।
गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ पठाउन उत्रिएका सुरक्षाकर्मी र डा केसीका समर्थक विद्यार्थीबीच झडपका क्रममा कम्तिमा पनि २ दर्जन घाइते भएका थिए । जसमध्ये गम्भीर घाइते थिए एक जना प्रहरी जवान कमल उपाध्याय । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उपाध्याय प्रहरीकै गोली लागेर घाइते भएका हुन् । तर जुम्ला प्रहरी भने यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी तपनकुमार दाहालले गोली नचलेको र प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको सिसाको टुक्रा लागेर प्रहरी जवान घाइते भएको बताएका छन् ।
प्रतिष्ठान परिषरको अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि कुनै पनि हालतमा अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरी आफै उत्रियो झुटको खेति गर्न ।
डीएसपी डा. तपन दाहाल आफै माइकिङमा उत्रिए र भने- ‘एकजना प्रहरी जवानको मृत्यु भइसकेको छ । हाम्रो प्रहरी जवान पनि मरेको हुनाले, क्याजल्टी भएको हुनाले… हामीले पनि धेरैबेर संयमता अपनायौं । तपाईहरु कोही आन्दोलन गर्न आउनुभएको छ भने गर्नोस्, केही छैन त्यसमा । हामी तयार छौं तपाईहरुलाई…. ‘
प्रहरी जवानको मृत्यु भएको घोषणा भएता पनि धेरै मिडियाले डीएसपी दाहालको माइकिङलाई पत्याएन । तत्कालै अस्पताल स्रोतमा सम्पर्क गर्दा कोही पनि प्रहरी जवानको मृत्यु नभएको पुष्टि भयो । त्यसपछि जुम्लामा जीवितै प्रहरी जवानलाई ‘मरेको’ भनेर यसकारण गरियो हल्ला, डिएसपी दाहालले खोले रहस्य शीर्षकमा संचारकेन्द्रले समेत समाचार प्रकाशित गर्यो र यथार्थ घटना जनसमक्ष आयो ।
हेर्नुहोस् घटनाबारे प्रहरी प्रवक्ताको विज्ञप्ति
(अनलाइन खबरको सहयोगमा) २०७५ साउन ४ मा प्रकाशित ।